Akhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 29ka Oktoobar 2018 | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Qorshaha akhrinta Baybalka Akhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 29ka Oktoobar 2018.
Akhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 29ka Oktoobar 2018.
Akhrintayada maalinlaha ah ee Baybalka ayaa laga soo qaatay buugga 2 Taariikhdii 21: 1-20 iyo 2 Taariikhdii 22: 1-9. Akhris iyo barakeysan.
Akhrinta Kitaabka Quduuska ah ee Maanta.
2 Taariikhdii 21: 1-20:
1 Haddaba Yehooshaafaad wuu dhintay oo la seexday awowayaashiis, oo waxaa awowayaashiis lagula aasay magaaladii Daa'uud; Oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii ​​Yehooraam. 2 Oo isna wuxuu lahaa walaalo oo ahaa ilma Yehooshaafaad, waana Casaryaah, iyo Yexii'eel, iyo Sekaryaah, iyo Casaryaah, iyo Miikaa'eel, iyo Shefatyaah, oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen ilma Yehooshaafaad kii ahaa boqorkii dalka Israa'iil. 3 Oo aabbahoodna wuxuu iyagii siiyey hadiyado waaweyn oo ah lacag, iyo dahab, iyo waxyaalo qaali ah, oo weliba wuxuu ugu daray magaalooyin deyr leh oo dalka Yahuudah ku yaal, laakiinse boqortooyadii wuxuu siiyey Yehooraam, maxaa yeelay, isagu wuxuu ahaa curadkiisii. Haddaba Yehooraam markuu boqortooyadii aabbihiis fuulay oo uu aad u xoogaystay ayuu walaalihiis oo dhan seef ku laayay, iyaga iyo kuwo kale oo ah amiirradii dadka Israa'iil. Oo Yehooraam markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood, siddeed sannadoodna boqor buu ku ahaa Yeruusaalem. 6 Oo wuxuu ku socday jidkii ay boqorradii dalka Israa'iil mareen, sidii reerkii Axaab yeelay oo kale, waayo, wuxuu qabay Axaab gabadhiisii; oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah. 7 Habase yeeshee Rabbigu ma uu doonaynin inuu baabbi'iyo reerkii Daa'uud, maxaa yeelay, axdi wuu la dhigtay, oo wuxuu u ballanqaaday inuu isaga iyo carruurtiisa had iyo goorba laambad siiyo. 8 Oo wakhtigiisii ​​ayaa reer Edom ka fallaagoobay dadka Yahuudah, oo iyana waxay yeesheen boqor u taliya. Markaasaa Yehooraam soo gudbay isagoo wata saraakiishiisii ​​iyo gaadhifardoodkiisii ​​oo dhan, oo intuu habeennimo kacay ayuu laayay reer Edom oo hareereeyey isaga iyo saraakiishii gaadhifardoodka. 10 Reer Edomna way ka fallaagoobeen oo way ka hoos baxeen gacantii dadka Yahuudah ilaa maantadan la joogo. Oo haddana isla markaasba waxaa kaloo ka fallaagoobay oo gacantiisii ​​ka hoos baxay reer Libnaah. maxaa yeelay, isagu wuxuu ka tegey Rabbigii ahaa Ilaaha awowayaashiis. 11 Oo weliba wuxuu buuraha dalka Yahuudah ka sameeyey meelo sarsare, oo dadkii Yeruusaalem degganaana wuxuu ka dhigay inay sanamyo raacaan, oo dadkii Yahuudahna wuu habaabiyey. Oo waxaa isagii u yimid qoraal ka yimid Nebi Eliiyaah, oo leh, Rabbiga ah Ilaaha awowgaa Daa'uud wuxuu leeyahay, Adigu kuma aadan socon jidadkii aabbahaa Yehooshaafaad maray, iyo jidadkii Aasaa oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah, 12 Oo waxaad ku socon jirtay jidkii boqorrada dalka Israa'iil, oo waxaad dadka Yahuudah iyo dadka Yeruusaalem deggan ka dhigtay sidii dhillooyinkii reerkii Axaab ka tegey oo kale, oo weliba waxaad laysay walaalihiin reerkii aabbahaa oo aad uga sii wanaagsanaa. 13 Bal eeg, Rabbigu belaayo weyn ayuu ku dhufan doonaa dadkaaga, iyo carruurtaada, iyo naagahaaga, iyo xoolahaaga oo dhanba, 14 Oo adiguna waxaa kugu dhici doona cudur weyn oo xiidmahaaga ayaa bukan doona, ilaa xiidmahaagu ay kaa dhacaan aawadood. maalinba jirro. 16 Oo weliba Rabbigu wuxuu Yehooraam ku soo kiciyey reer Falastiin iyo reer Carabta oo ag joogay reer Itoobiya, oo iyana intay dalka Yahuudah yimaadeen ayay gudaha ku galeen oo burburiyeen kulli waxyaalihii boqorka laga helay oo dhan. guriga, iyo wiilashiisii ​​iyo naagihiisii; Oo Yehoo'aaxaas oo ahaa kii yaraa wiilashiisii ​​mooyaane wiil kale lagama tegey. Oo waxaas oo dhan dabadood Rabbigu wuxuu isaga xiidmihiisii ​​ku dhuftay cudur aan la bogsiin karin. Oo wakhtigii waa iska socday, oo laba sannadood dabadood waxay noqotay in xiidmihiisii ​​la soo dhacay cudurkiisa aawadiisna isagu wuxuu u dhintay cudurro xunxun. Oo dadkiisiina isaga uguma ay shidin sidii awowayaashiis oo kale. 20 Oo markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood, oo Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa siddeed sannadood, oo wuxuu tegey isagoo aan la jeclayn.
2 Taariikhdii 22: 1-9:
1 Oo dadkii Yeruusaalem degay ayaa meeshiisii ​​boqor uga dhigay Axasyaah oo ahaa wiilkiisii ​​ugu yaraa, maxaa yeelay, guutadii ragga ahayd ee reer Carbeed xerada la timid way wada laayeen kuwii waaweynaa oo dhan. Haddaba Axasyaah ina Yehooraam oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah ayaa boqor noqday. Axasyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo afartan sannadood, oo Yeruusaalemna sannad ayuu boqor ku ahaa. Oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Catalyaah ina Coomrii. Oo isaguna wuxuu ku socday jidadkii reerka Axaab maray, waayo, hooyadiis waxay kula talin jirtay inuu shar sameeyo. 2 Oo isagu wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah sidii reerka Axaab yeeli jiray oo kale, waayo, markii aabbihiis dhintay ka dib iyagaa ahaan jiray lataliyayaashiisii ​​ilaa uu baabba'ay. 3 Oo weliba wuxuu ku socon jiray taladoodii, wuuna raacay Yehooraam ina Axaab oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil inay Xasaa'eel oo ahaa boqorkii Suuriya kula diriraan Raamod Gilecaad, oo reer Suuriyana Yooraam bay dhaawaceen. 4 Oo wuxuu ku noqday Yesreceel in lagu soo daweeyo nabrihii lagu qabay Raamaah markuu la diriray Xasaa'eel oo ahaa boqorkii Suuriya. Markaasaa Axasyaah ina Yehooraam oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah tegey inuu soo arko Yehooraam ina Axaab oo joogay Yesreceel, maxaa yeelay, dhaawac buu ahaa. Haddaba Axasyaah baabbi'iisii ​​wuxuu ka yimid xag Ilaah, markuu Yooraam u yimid, maxaa yeelay, markuu yimid ayuu Yehooraam kula kacay Yeehuu ina Nimshii kaasoo Rabbigu u subkay inuu baabbi'iyo reerka Axaab. Oo kolkii Yeehuu xukunka ku soo dejinayay reerkii Axaab wuxuu helay amiirradii dalka Yahuudah iyo Axasyaah walaalihiis wiilashii ay dhaleen oo Axasyaah u adeegaya, markaasuu iyagii laayay. 5 Oo isagu wuxuu doonay Axasyaah, oo way soo qabteen, maxaa yeelay, wuxuu ku qarsoonaa Samaariya, oo waxaa loo keenay Yeehuu, oo markay dileen ayay aaseen, maxaa yeelay, waxay yidhaahdeen, Isagu waa ina Yehooshaafaad oo isagu waa kii Oo wuxuu Rabbiga ku doondoonay qalbigiisa oo dhan. Oo Axasyaah reerkiisiina ma uu lahayn xoog uu ku sii haysto boqortooyada.
article PreviousAkhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 28ka Oktoobar 2018
Next articleSalaada saarta ee ka soo horjeedka ruuxa sinada
Caawinaada ayaa socota
HOOS KA DHAGAYSO: SII BILAASH EE WAQTIGII
Akhrinta Kitaabka Qudduuska ah ee Maalinlaha ah 30-ka Oktoobar 2018
Qodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Dhibaatooyinka
31 Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay Kobcinta Kaniisadda